नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड र NIBL को सहकार्यमा संचालित कर्जा लिन चाहनुहुन्छ ? यस्तो छन् प्रक्रिया « Sansar News
नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड र NIBL को सहकार्यमा संचालित कर्जा लिन चाहनुहुन्छ ? यस्तो छन् प्रक्रिया
२४ असार २०७८, बिहीबार १०:५७
के तपाईले कुनै ब्यापार, ब्यवसाय र उद्योग संचालन गर्न नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड र NIBL को सहकार्यमा संचालित लघुबित्त कर्जा, कृषी तथा पशुपंछी कर्जा र महिला उद्यमशिलता कर्जा लिन आबेदन दिनु भई हालसम्म कर्जा पाउन सक्नु भएको छैन ?
यस्तो छन् प्रक्रियाहरु :
– पहिला आफ्नो जिल्लाको फोकल पर्शन वा युनिटको सम्पर्क अधिकृत वा NIBL को शाखा वा नजिक ईपीसेन्टर कार्यालय छ भने त्यहा गई कर्जा कार्यक्रम बारे राम्ररी बुझ्नु होस ।
– तोकिएका सबै कागजपत्र सहित फाईल बनाउनु होस र सकेसम्म फोकल पर्शनलाई देखाउनु होस । टाढा वा फोकल पर्शन फेला नपरे फाईल लिई ईपीसेन्टरमा आई कर्जा फांटमा काम गरिरहेका पदिक/बिल्लादारलाई भेटी फाईल चेक गराउनु होस ।
– फाईल नियम अनुसार ठिक छ भने ईपीसेन्टरका अधिकृतले बैकको शाखालाई सिफारिस पत्र बनाई दिन्छन् । तपाईको फाईल आफैले लिएर जानु भएपनि हुन्छ वा ईपीसेन्टर मै छोडी दिएपनि हुन्छ । ईपीसेन्टरले पछि अन्य निबेदकहरूको फाईल संग बैकको शाखा कार्यालयी पठाई दिन्छ ।
– बैकको शाखाले बैकको नियम बमोजिम तपाईको कागज पत्र, ब्यापार ब्यवसाय उद्योगहरू हेर्छ र धितोहरू राखेको भए चेक गर्छ ।
– कर्जा स्विकृत भएपछि बैक शाखाले कल गर्छ र रकम लिन(जोई/पोई) बैकमा उपस्थित हुनु पर्छ । एकजनाको उपस्थितीमा मात्र चेक दिदैन बैकले ।
-फाईल बैकका शाखाहरूमा पुगे पनि निम्न कारणहरूले कर्जा (Loan) स्विकृत हुदैनन् ।
१) खराब ऋणीमा तपाईको नाम सुचिकृत छ भने,
२) कालो सुचिमा तपाईको नाम परेको छ भने,
३) PAAN र ब्यवसाय दर्ता गरेको कागज वा नम्बर नमिलेमा ।
४) ब्यवसाय संचालनको प्रस्तावित योजना पेश नगरेमा ।
५) कर्जा आवेदन गरेको मितीबाट ६ महिना भित्र कर्जा हात परेको छैन भने सो आवेदन स्वत: रद्द हुन्छ ।
६) धितो राखेको जग्गा रोक्का भएको छ भने,
७) धितो राखेको जग्गाको चारकिल्ला खुलेको कागज र मुल्यांकन गरेको प्रमाणित कागज छैन भने ।
८) आवेदकको उमेर ६० बर्ष नाघेको छ भने,
९) आवेदनमा तोकिएको ब्यावसाय संचालन गरेको छैन भने,
१०) झुठो बिबरण पेश गरेमा,
११) २ श्रीमती भएमा, दुवैको श्रीमतीको सहमती र समर्थन पत्र चाहिन्छ । सो नभएमा,
१२) आवेदन वा ब्यावसाय दर्ता गर्दा मदिराजन्य र सुर्तिजन्य बस्तुको ब्यवसाय उल्लेख भएमा,
१३) धेरै खराब ऋणीहरू भएका बैकका शाखाहरूमा कर्जा आवेदन गरेमा ।
(मुकारूङ नेपाली सेनाका पूर्वमहासेनानी हुन् ।)